Nchekwa nchekwa - Akụrụngwa Egwuregwu Haiber (Shanghai) Co., Ltd.
Nchedo ụmụaka bụ ihe mbụ achọrọ maka ogige ntụrụndụ ime ụlọ, ọ bụkwa ọrụ dịịrị anyị ịhazi ma mepụta ogige ntụrụndụ ndị na-agbaso ụkpụrụ ndị a.
Na Europe na United States na mpaghara ndị ọzọ mepere emepe, n'ihi ịdị mkpa nke nchekwa n'ime ụlọ na afọ nke gburugburu ebe ahịa toro eto, yabụ n'egwuregwu ime ụlọ nwere usoro na ụkpụrụ nchekwa zuru oke, ejiri nwayọọ nwayọọ nabata nke ọma dịka ụkpụrụ nchekwa mba ụwa.
Ebe a na-egwuri egwu n'ime ụlọ nke shei oké osimiri na-agbaso ụkpụrụ nchekwa dị mkpa ụwa dịka EN1176 na American ASTM, ma gafere ndị America ASTM1918, EN1176na ule asambodo nchekwa AS4685. Safetykpụrụ nchekwa mba ụwa anyị na-agbaso n'ichepụta na mmepụta gụnyere:
ASTM F1918-12 bụ nke nchekwa nchekwa izizi ahaziri maka egwuruegwu n'ime ụlọ ma bụrụkwa otu usoro nchekwa mba ụwa nabatara maka egwuregwu dị n'ime.
Ngwaọrụ niile eji eme mmiri n'oké osimiri agafeela ogo ASTM F963-17 maka ọkụ na nyocha anaghị egbu egbu, ebe egwuregwu niile anyị wụnyere na North America agafeela ule nchekwa na ọkụ. Na mgbakwunye, anyị agafeela ọkọlọtọ ASTM F1918-12 na ọkọlọtọ nchekwa nchekwa, nke na-ahụ na ogige gị nwere ike ịgafe ule nchekwa obodo ma ọ dị mkpa ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa.
EN 1176 bụ ihe nchekwa maka ime ụlọ na ebe a na-egwu egwuregwu dị na Europe, a na-anakwere ya dịka ọkọlọtọ nchekwa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọnweghị njedebe na nchekwa ime ụlọ dị ka astm1918-12.
Ngwa anyị niile agafeela ule nke ọkọlọtọ EN1176. Na Netherlands na Norway, ebe egwuregwu maka ndị ahịa anyị agafeela nnwale siri ike n'ime ụlọ.
As3533 & AS4685 bụ ọkọlọtọ ọzọ bụ nke akọwapụtara maka nchekwa ntụrụndụ ime ụlọ. Anyị emeela nnyocha zuru ezu banyere ụkpụrụ nchekwa a. Ihe niile agafeela n’ule ahụ, ma etinyekwala ụkpụrụ niile na ntinye ma rụpụta nrụpụta.